Akazenyezi ngazalwe eyikhona uMiss Sundowns
USHARON Rose Khumalo onguMiss Sundowns ophumele obala ngokuthi kunezitho zowesifazane angenazo Isithombe:SITHUNYELWE
ZANELE MTHETHWA | February 16, 2017
IZINKINGA ngobulili bakhe kazimvimbelanga ukuthi afeze iphupho lakhe lokumodela uMiss Sundowns, othi uphila njengabo bonke abesifazane phezu kokungayi esikhathini.
UNksz Sharon Rose Khumalo (25), okhulele eMamelodi, uqale ukwazi eneminyaka ewu-21 ukuthi akanawo amaqanda njengabanye besifazane, okusho ukuthi ngeke akhulelwe futhi akayi esikhathini.
Yize kwamethusa ukwazi ngesimo sakhe uthe kodwa kwaba yicebo likaNkulunkulu ukuthola esekhulile.
“Ngicabanga ukuthi ukube ngasheshe ngathola ngesimo sami ngisemncane, ngangingeke ngikwazi ukwamukela. Ekhaya sasinganakile ukuthi angizili, sicabanga ukuthi umzimba wami uthatha kancane. Bengilokhu ngihlehlisa uma kuthiwa angiyobona udokotela ngaze ngaya sengino-21,” kusho uNksz Khumalo.
Uthe kwaba nzima etshelwa ngesimo sakhe kodwa ukuba nomndeni omesekayo kumsizile. Ngaphandle kwale nkinga yokungabi nanzalo, konke okunye uthi kufana nowesifazane ngisho imizwa yakhe.
Uveze ukuthi uke wahlinzwa ngenxa yokuthi bese kuqala ukuhluma izinhlamvu zamankwahla kodwa ngale kwalokho akanayo imizwa yendoda.
UNksz Khumalo, ongathandani namuntu okwamanje, uthe unemizwa yokuthanda abesilisa kanti nomzimba wakhe ungowesifazane.
Waqala ukubonakala kwezokumodela engenela uMiss South Africa (SA) nyakenye wagcine esale kwiTop 5. Ukutshela abantu bangaphandle ngesimo sakhe ukuqale emajajini alo mncintiswano.
“Ngabona kufanele ngiwacacisele amajaji yize ukuphumela kwami obala bekungeke kungikhiphe emncintiswaneni. Bengifuna ukuthi bezwe ngami futhi ngajabula uma bengamukela. Emuva kwalokhu ngaqala iBlog yami, ngaphumela obala kuyo ngiqwashisa nabanye ngalesi simo futhi ngazizwa ngikhululeke kakhulu kunakuqala.”
UNksz Khumalo uthe okumduduzayo wukuthi bakhona abanye abanalesi simo yize bembalwa abaphumela obala. Akudingi ukuthi wonke umuntu aphumele obala njengaye kodwa okubalulekile wukuthi uzamukele ukuthi akulona iphutha lakho ukudalwa ngale ndlela.
Mayelana nothando lokumodela uthe waqala esafunda engenela imincintiswano nasesontweni. Ngesikhathi uKerishni Naicker ethatha isicoco sikaMiss SA ngo-1997, uSharon wayazi ukuthi ngelinye ilanga naye uyothweswa esakhe.
Uthe ukuba nguMiss Sundowns kuyindlela yokuheha abesifazane ebholeni nokubathuthukisa.
Uthe akabanga nankinga ukuhlwithwa isicoco ngoba wakhulela eMamelodi lapho iSundowns isekwa khona kakhulu.
“Ngiyalithanda ibhola futhi bengivele ngilithanda. Angikujabuleli ukulibuka kwithelevishini kodwa ngithanda ukuba senkundleni.”
UNksz Khumalo wafunda e-University of Pretoria wenza iVerterinary Biology ngo-2009 wayifeyila. Kwadingeka ahlale unyaka ekhaya abazali bethi akacabange kahle ngafuna ukukwenza.
Wasebenza ezindaweni zokudla enguweta unyaka ngaphambi kokubuyela enyuvesi wenza iDegree kwiBiological Sciences, wabuye wenza iBiotechnology neBiochemistry ayiphothule ngo-2014.
Uke waba nguthisha efundisa abafundi baseChina isiNgisi nge-internet. Manje ungusokhemisi, umsebenzi ongamphazamisi emsebenzini wakhe wokumodela.